Maqaal: Meesha Soomaali maanta marayso
Maxammed Maxammuud Aw Cabdi. Ndola- Zambia.
Ummadda Soomaaliyeed oo Alle ku beeray geeska Afrika oo qarniyaal tira badan soo jirtay, waxay soo lahaan jirtay dhaqan iyo hiddo in badan ka duwanaa beelaha beeraha qota ee ay dariska yihiin. Dabeecadda iyo hiddaha u gaarka ahna waxa sameeyey oo saamaynta ugu weyn ku lahaa meesha ay degaan oo dalsan ah oo ciid iyo hawo wanaagsan leh, iyo meheradahooda oo duunyo dhaqasho iyo ganacsi dibadda ah isugu jirey, oo labaduba dalmarid ku dhisnaa.
Dadka xoola dhaqatada ahi waa dad guura oo dalka mara oo intaas daawanaya dabeecado kala duwan iyo astaamo iyo uuman badan oo Alle weyne abuuray, taas oo u kordhisa il-dheeri iyo aqoon, iyo karti iyo adkaysi, oo Soomaalidu waxay tiraahdaa nimaan dhul marin dhaayo ma laha, taas oo waafaqsan sida Alle weyne Quraanka ku sheegay markii u lahaa:
“Mawaysan dhulka marin qalbiyo ay wax ku gartaan iyo dhego ay wax ku maqlaan bay yeelan lahaayeene” Alxaj 46.
Marna waxay hadba degi jireen ruun ugbaad ah oo hawo nadiif ah iyo carro cusub leh, oontooduna waxay ahayd caano galax ah oo weel culan ku jira iyo cad dubaax ah. Sidaas daraaddeed bay dadka kale uga caafimaad iyo caqli roonaayeen.
Dhinaca kalana ummadda Soomaaliyeed oo Alle ku mannaystay xeeb dheer waxay isaga gooshi jireen dalal badan oo adduunka ka mid ah iyagoo doonyo adeegsanaya oo ay badeecadahooda u suuq gayn jireen badeecado kalana ka soo gadan jireen, taasna waxay ka soo kororsan jireen ilbaxnimo iyo dal-aqoon, iyagoo soo arki jiray mucjisada badda iyo meelo dunida ka mid ah.
Iyagana waxaa adduunka kale uga imaan jirey ergooyin ay heshiis wada gali jireen ganacsina is dhaafsan jireen. Wufuuddii soo booqatay oo raadka taariikhda lagu hayana waxaa ka mid ahaa wafdi xoog leh oo ay hoggaaminaysay boqoraddii dalka Masar Xatshabsuut, oo dalkaas ka talin jirtey kumannaan sano ka hor. Boqoraddaasi markii ay socdaalkaas ka noqotay waxay xarunteeda taariikhda lagu kaydiyo ee magaalada “Uqsur” ku xaradhay sawirkii boqorkii waagaas Soomaalida madaxda u ahaa iyo marwadiisii oo iyana boqorad ahayd, oo la kala oran jirey Baraxow iyo Baraxey. Iyagoo labbisan dharkii Soomaalida hiddaha u ahaa.
Soomaalidu iyadoo dalkeedaas Alle ku mannaystay deggan oo duunyadeeda iska dhaqata badaheedana ku socdaasha bay markii dambe diinta islaamku soo gaartay iyagoo aan hanbayn bayna hal mar wada galeen, taasina waxay noqotay gallad kale oo Alle ku mannaystay.
Taas oo sii kala fogaysay iyaga iyo dariskoodii ay awalba dabeecad ahaan kala fogaayeen, markii ay diinta xaqa ahi soo gaartay oo noloshoodii raad ku yeelatay oo sii bishay.
Iyaga iyo dawladda Xabashida oo ay daris ahaayeen oo iyana diinta kiristaanka haysatay waxaa dhex maray dagaallo iyo colaad daba dheeraaday, waxayna noqdeen laba qaaruumood oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba kala durugsan oo loolan ka dhexeeyo. Iyadoo boqortooyadii Xabashidu ku taamtay in badan inay gacanta ku dhigto dalka Soomaalida oo xeebta ballaaran Alle ku galladay kaddib markii ay wayday xeebtii Eretareeya oo dadkii degganaa ay muslin noqodeen oo ay noqotay degmo hoos timaadda gobolka Xijaas iyo taliskii Muslimiinta.
Shacabka Soomaaliyeed oo dad dhiirran ahaa oo aan gunnimada qaadan baana taas ka diiday oo waligeed riyadaasi uma meel marin.
Boqor Miniliggii labaad oo ka faa’idaysanaya dawladihii reer Yurub oo ay isku diinta ahaayeen oo waagiisa aadanaha u taag roonaa baa ku dadaalay inay riyadaasi u meel marto oo u soo bandhigay dawladihii markaas dhulka u xoog badnaa qorshihiisii dal ballaarsiga ahaa oo u ku doonayey in dhulka Soomaalida oo dhan gacanta loo galiyo. Isagoo ka qayb galay shirkii Baarliin ka dhacay sannadkii 1889 ee Afrika lagu saanyaday siiba Afrikada bari. Iyadoo halkaasna saami loo siiyey qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed.
Boqor Minilig dhambaal dheer ayuu u kala diray dawladihii markaas Yurub u taag roonaa oo kala ahaa Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga. Qoraalkaas oo uu ku soo bandhigay qorshayaashiisa uu ka doonayo in gacan lagu siiyo. Kaas oo Adis Ababa ka soo baxay taariikhdu markii ay ahayd 10 April 1891. Qoraalkaas oo aan dhawr qodob oo markhaati ah ka soo xigtay, si aan u dareenno hankii iyo damacii minilig qabay, oo la maagganaa dalalka dariska ah oo Soomaaliya iyo Suudaan ku jiraan. Waxaana ereyadiisii ka mid ah:
“Formerly the boundary of Ethiopia was the sea. Having lacked strength sufficient, and having received no help from Christian Powers, our frontier on the sea coast fell into the power of the Muslim-man”.
“Waagii hore xudduudka Itoobbiya xeebta ayuu ahaa. Ee markii ay xoog ku filan weyday, xoogagga Kiristaankana ay taageero ka weyday bay xudduuddayadii xeebta ku sinnayd gacanta u gashay xoogag Muslim ah”
“Ethiopia has been for fourteen centuries a Christian island in a sea of pagans. If powers at a distance come forward to partition Africa between them, I do not intend to be an indifferent spectator”.
“Itoobbiya muddo afar iyo toban qarni ah bay ahayd Jasiirad Kiristaan ah oo ku dhex jirta bad wada cawaan ah. Marka haddii ay timaaddo mustaqbalka inay quwaduhu Afrika qaybsadaan ma rabo inaan noqdo goobjooge ka duwan” macnaha qaybsiga ayaan ka qayb galayaa. Waxa uu cawaanta aan diinta lahayn ku sheegayaa waa dadka muslimka ah oo Soomaalida, Suudaan, Eretareeya iyo Qaaruumaha muslimka ah ee Itoobbiya wax ka degaba lahaa.
Boqor Minilig oo ahaa nin damac weyn wuxuu shirkii reer Yurub la tagay soo jeedin ah in dalka Soomaalida oo dhan loo dhiibo laakiin dawladaha reer Yurub oo garanayey kartida iyo fir-fircoonida dadka Soomaalida ayaa u sheegay haddii uu Soomaali oo dhan qabsado inay Soomaalidu mustaqbalka la wareegayaan awoodda dawladda Itoobbiya oo dhan, halkaasna lagu waayayo saldhiggii faca weynaa ee geeska Afrika Kiristaanku ku lahaa. Taas baddalkeedana waxay u ballan qaadeen inay gacanta u galiyaan dhulka Soomaalida oo sare oo dhan Soomaalidana badda iyo dhulka kulul lagu ciriiriyo oo loo reebo 180 mayl oo kaliya wixii badda ka soo kacsan.
Alle waa wadaanwada’e riyadii ay wax badan Xabashidu ku taamayeen oo ay xoog iyo xeelba ku waayeen, oo ay ku doonayeen inay mar dhulka Soomaaliyeed gacanta ku dhigaan, bay maanta si hawl yari ah ku gaareen, oo waxaa la arkay askartii xabashida oo xeebaha badweynta Hindiya tamashlaynaya oo caasimaddii Soomaaliya iyo ubucdii qarankeenna galay.
Waa yaabe goormaan Itoobbiya heshiinnay oo aan wixii naga dhexeeyay oo dal iyo dad iyo diin ahaa ka wada hadallay oo dhibaatooyinkii faca weynaa ee na soo dhex maray isla meel dhignay oo ka gudubnay. Qaddiyaddii qarniyada loo dagaallamayey oo boqollaalka kun ku dhinteen goormaa la daweeyay?
Dadku waa heshiin karaan haddii ay daacad noqdaan oo wixii soo dhex maray iyo wixii sababayba ka wada hadlaan oo go’aan iyo heshiis ka gaaraan iyadoo ciddii gar darrayd gar qaadanayso wixii dhib dhacayna la daawaynayo oo xal waara loo helayo. Laakiin nasiib darro iyadoo aan la is weyddiin wixii dhacay oo Soomaali dhibaatada weyn ka soo martay oo ay raadintiisa dad iyo duunyo iyo dawladnimaba ku weyday iyadoo aan Itoobbiya lagala xaalin oo aysan waxba ka oggolaan dalkii iyo dadkii iyo diintii aan isku haynnay baa lagu abaal mariyey in la yiraahdo waa walaalaheen aan saaxiib nahay, maantana loo soo horkaco dalkeennii hooyo oo gacanta loo galiyo.
Maalin dhawaydna nin ka mid ah la-taliyeyaasha xukuumadda Itoobbiya oo Barakaat la yiraahdo baa ku baanay inay dhammaan gobollda Soomaaliyeed oo dhan gacanta ku dhigeen oo xasiliyeen, ayna taasi ku gaareen khasaaro ka yar tii ay ugu tala galeen. Xataa kama ay reebin SoomaaliLand iyo PuntLand, isla markaasna ma aysan oran gobolladii Maxaakimtu ka talisay, ciidanka dawladda inay hawsaas la qabteen ama la hayaanna ma ay qiran.
Ina Caydiid warkii uu ku hadlayna waa la ogaa, awalna waatii la shaaciyey maabka geeska Afrika oo Soomaaliya magaceeda laga tiray oo Itoobbiya lagu baddalay. Waxyaalahaas oo dhammi waxay muujinayaan inay faragalinta Itoobbiya iyo duqaynta Maraykanku ay ujeeddo weyni ka dambayso.
Waligay kuma hammiyin inaan arkayo dad Soomaaliyeed oo ku qanacsan inay Itoobbiya dalkeenna qabsato, oo ku faanaya inay Itoobbiya walaalahood yihiin oo dawladnimo ku gaarayaan, isla markaasna ka xanaaqaya haddii Itoobbiya wax laga sheego ama gaalada kalaba, waxaaba ka sii daran in ciddii diiddan inay Itoobbiya dhulkeenna hooyo qabsato la ceebaynayo oo daba-dhilif lagu sheegayo. Waa adduunyo dabada loo rogaye waxaa ammaan iyo wax lagu faano noqday in cadowgii Soomaaliyeed ee guunka ahaa walaal iyo saaxiib laga dhigto oo dalkeennii loo soo horkaco, in gaalada gumaysigeeda la diidana ceeb bay noqotay la isku canbaareeyo.
Allow adigaa weyne tanina ma noo dambaysay?!! Aaway ummadnimadii iyo qiiradii waddaninimo? Aaway muslimnimadii iyo gaalo nacaybkii? Aaway qabkii iyo qiiradii Soomaali hiddaha u lahayd? Aaway hankii iyo hawadii sarraysay ee aan ku faani jirnay? Aaway gobannimadii iyo gunnimo nacaybkii? Intaasba ma laga xuubsiibtay? Ma xukun adduunyo jeclaantiis baa Alle iyo aakhiro laga doortay? Waddaniyaddii iyo gobannimadiina ma gaalo raacid baa la siistay? Yaa u sheego makasta in marxaladdaan madow laga baxayo oo Soomaali maalin lugaheedii isku taagi doonto, oo waxa maanta dhacayaa dadku ka sheekaysan doono, taariikhna ay reebi doonto. (waa la doogiye yaan la dacaroon).
Nimanka Soomaali madaxdeeda ah ee go’aanka ku gaaray inay ciidankii Itoobbia oo loolanka iyo colaaddu muddada badan noo dhexaysay soo horkacaan oo dalkii oo dhan gacanta u galiyaan. Iyagoo ku doodaya inay dawladda gacan ku siinayaan sidii kala dambayntii iyo midnimadii Qaranka Soomaaliyeed ee dumay loo soo celin lahaa. Arrintoodu meel kala bayr ah bay taallaa. Waa inay noqdaan qabbaan Itoobbiya u soo adeegsatay inay danaheeda ku fushato oo riyadeedii soo jireenka ahayd ku gaarto. Oo ay laba middood ku fushato, inay dalkaba si toos ah u qabsato oo ay samayso maamul-goboleedyo ay ku shaqaysato oo kor ka xukunto, iyo inay intay dalka oo dhan cagta mariso oo wixii karaankeed ah dhibaatayso oo colaad iyo isnacayb Soomaali dhex dhigto ay haddana isaga baxdo iyadoo aan waxba la qaban.
Labadaas jeerba waxaa caddaanaysa Itoobbiya inay tahay cadowgeennii guunka ahaa oo aysan waxba iska baddalin colaaddii iyo nacaybkii ay noo haysay, ragga soo horkacayna waxay noqonayaan dambiilayaal dalkoodii iyo dadkoodii khiyaanay oo taariikh madow yeesha, iyaga iyo wixii taageerayna tuke canbaar leh bay Soomaali dhexdeeda ka noqonayaan, ciriq xumo iyo ceeb baana u dambaynaysa, Alle hortiisna wixii u yaal waa u hareen, ubadkoodana taariikh xun bay u reebayaan.
Qolyahaas Itoobbiyaanka soo kaxaystay haddii ay ku guulaystaan inay haykalkii dawladnimo ee Soomaaliya soo celiyaan, oo ay u suuragasho inay ummadda mideeyaan maslaxad iyo dib-u-heshiisiinna ka shaqeeyaan, ciidanka Itoobbiyana ay iska saaraan, waxaan filayaa inay ummadda Soomaaliyeed eeddi ay ka galeen iska illaawayaan oo cafinahayaan, wixii ay magac xumo iyo dhibaato gaysteenna waa laga soo kabanayaa.
Dawladda Itoobbiyana haddii ay dawladda ku meel gaarka ah gacan ku siiso xasilinta dalka iyo dib-u-heshiisiinta dabadeedna ay ciidankeeda la baxdo, iyadoo aan dhibaatooyin kale oo gaar ah shacabka Soomaaliyeed u gaysan, taasi waxay soo dhawaynaysaa inaan ka wada hadallo eedihii iyo dhibaatooyinkii aan ka tirsanaynna oo ay u dambeeyeen muddadii dhawr iyo tobanka sano ahaa oo ay shacabka Soomaaliyeed u diidday inay dawlad yeeshaan iyadoo dabada ka soo riixaysay qab-qableyaal xukun u oomman oo ay iyadu wadato oo ku khasabtay shacabka Soomaaliyeed oo diiddan.
Waxaana xaqiiqo ah inaan arrintaas wanaagsan xoog millatari oo kali ah lagu gaari karin, walow xooggu yahay wax aan laga maarmahayn, ee waa in ay dawladdu la heshiisaa dhammaan mucaaradkeeda ay is hayaan, oo madaxdii maxaakiimta iyo siyaasiyiinta kaleba leh, ayna dareemaan inay dawladdoodii tahay oo dawlad Soomaali u dhaxaysa tahay oo dhibkeeda iyo dheefteedaba loo siman yahay, oo aan qolo ama koox gaar u lahayn, oo waliba laga qayb galiyaa maamulka, oo dawlad sal ballaaran oo loo dhan yahay la dhisaa, si looga hortago dagaal sokeeye oo daba dheeraada oo lagu riiqdo.
Shacabka Soomaaliyeed ee rayadka ah ee xabbadaha aan loo meel-dayahayn ay ciidamada Itoobbiyaanku isaga furayaan iyo wixii dhibaato ah oo dadka iyo dalka loo gaysto waxaa masuul ka ah dawladda ku meel gaarka ah ee ciidanka Xabashida dalka soo galisay. Sidoo kale waxaa dakano aan harahayn ah in dad Soomaaliyeed ciidanka Xabashida gacanta loo galiyo ama lagu soo hoggaamiyo. Haddii ay jiraan dad eed loo haysto oo Soomaali ah waa in loo diraa ciidan Soomaali ah, ayna gacanta ku hayaan boolis Soomaali ah oo sharciga yaqaan.
Maxaakimtii Shareecada oo maamulkoodii la tuurayna waa inaan waxba loo raacan, maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed wax-badan bay u tareen, dalkooda inay difaacaanna xaq bay u lahaayeen oo cidina kuma eedayn karto.
Waa in qof walba oo muwaaddin Soomaaliyeed ahi uu dareemaa inuu nabad iyo xorriyad helayo oo aan fikraddiisa iyo diintiisa midna lagu ugaarsanahayn. Markaas waxaa hubaal ah inaan cidina colaad iyo dhibaato raadinahayn. Laakiin haddii qolo gaar ah ama koox gaar ah la takooro oo colaad iyo dagaal lagu hayo waxaa hubaal ah inay dad badan ciil darti isu rogayaan bunbooyinka qarxa Soomaaliyana ay sida Ciraaq isu rogayso oo ay soo baxayaan dad inta ciilkii ka xoog badiyey aan waxba bixinayn naftooduba ha u horraysee.
Dawladda iyo Itoobbiyaankuba waa inay garowsadaan inaan xoog millatari waddan lagu xasilin karin laguna haysan karin, taasna waxaa tusaale inooku filan waddanka Ciraaq oo ay qabsatay dawladda Maraykanka oo lixaadka hubkeeda iyo dhaqaalaheeda la ogyahay. Waxaana caddaatay in xoogga millatari waddan lagu qabsan karo waxna lagu baabbi’in karo laakiin aan guul lagu gaari karin isla markaasna dal iyo dad ku diiddan lagu haysan karin.
Kolla aniga ilama aha dawladda ilama aha inay dawladda Itoobbiya oo aan ognahay colaadda faca weyn ee ay Soomaali u hayso, iyo damaca ay dalkeenna ka qabto inay gacan nagu siinayso inaan dawlad xoog leh oo Soomaali midayso yeelanno maxaa yeelay iyadaa sabab u ahayd dumintii dawladdii dhexe ee Soomaaliya oo jabhadihii ay soo hubaysay baa qarankii Soomaaliyeed dumiyey, isla markaasna iyadaa sabab u ahayd dawlad la’aanta intaas na haysatay oo dawladdii la soo dhisaba waxaa hortaagnaa qab-qableyaal ay soo hubaysay oo amarkeeda ku shaqaynaya, ugu dambayntiina markii Soomaali garabkii Itoobbiya wadatay taladii looga tanaasulay bal inay haykalkii dawladnimo soo celiyaan, rajiimka xumi mar buu iska tagayaaye, raggii ay dabada ka wadday oo Soomaali ku toshay markii laga hor leexday, bay is-hortaagtay oo qab-qableyaal kale oo ka sii xun ka hor keentay.
Halkaasna waxaa ka caddaatay inaysan Itoobbiya dawlad dhisiddeed nala rabin xataa haddii ay garabkeedu hoggaaminayaan, oo sidaas ayaanan rajo fiican uga qabin inay Itoobbiya gacan nagu siiso inaan dawlad lixaad leh oo lugaheeda isku taagta yeelanno, haddii aysan danteeda u arag oo ragga ay u dhiibayso hubin inay u fulinayaan danaheeda gaarka ah ee ay Soomaaliya ka leedahay, oo waliba kalsooni buuxda ku qabin inay wax aysan qabsan karin u qabanayaan, maxaa yeelay waa ay og-tahay inaysan Soomaali xoog ku haysan karin haddii ay israacdo oo mar soo jeensato.
Waxaan iyagana eedda wax ka saarayaa maxaakimtii ku guulaystay inay muddo gaaban gacanta ku dhigaan dhul ballaaran oo dalka Soomaalida ka mid ah iyadoo aan dhiig ku daadan oo wax dhibaato ahi dhicin, iyagoo runtii loo riyaaqay sidii ay ammaanka ugu soo celiyeen meelihii ay hanteen siiba caasimaddii dalka. Iyagoo shacabka Soomaaliyeed u soo celiyey rajadii kaddib markii ay ka adkaadeen oo dalka ka saareen qab-qableyaashii gaalada u adeegayey oo shacabkoodii madaafiicda ku laayey iyagoo waliba jagooyin sare sheeganayaa.
Saraakiishii maxaakimta hoggaaminayey waxay ku fashilmeen inay fursaddaas qaaliga ee gacantooda soo gashay shacabka Soomaaliyeed uga faa’ideeyaan, nasiib darro waxay ku dheceen shabaag cadowgoodu u dahay, iyadoo laga faa’idaystay niman ku jira oo aan daacad ahayn ama talo-xun oo siyaasadda caalamka ka warla, oo cadowgoodii awalba gaadayey oo meel uu u soo maro la’aa bay siiyeen mar-marsiinyo ay dalka ku soo galaan, kaddib markii ay ku dhawaaqeen inay weerarayaan ciidammada Itoobbiya ee dalka idan la’aanta ku soo galay. Isla markaasna ku duuleen aagga magaalada Baydhabo oo xarun u ahayd dawladdii ku meel gaarka ah gaaladu ilaashanaysay.
Inay dalkooda gaalada ku soo duushay ka difaacdaan daw bay u lahaayeen laakin wax aysan tabar u hayn inay laacaan ma ahayn, waxay ahayd inay intii tabartooda ah tillaabsadaan, oo taladooda iyo tabtooda iyo tallaabadooda is waafijiyaan. Waxayna ahayd inay ku koobnaadaan meelaha ay joogeen, oo halkaas maamul fiican ka dhisaan, oo tusaale ka muujiyaan, aysanna ku deg-degin waxyaalaha ay dadku u arkayaan cabburintooda, iyo isballaarin toonna, Soomaalida kalana ay kula taliyaan inay cadowga dalkooda ka saaraan.
Sidoo kalana dhaq-dhaqaaqoodii iyo hadalladii hanjabaadda iyo cudud muujinta ahaa ayaa ra’yu caamka caalamka ku qanciyey mar-marsiinyihii Itoobbiya oo ahaa inay maxkamaduhu halis ku hayaan jiritaankeeda. Waxaa kaloo xaqiiqo ah inay maxaakimta ku soo jabeen shacab ka tira badan oo wax walbaale ah waa la is huwanaa, maanta ayaase la kala miirmayaa oo ninkii diintiisa iyo dalkiisa daacadda u ahaa iyo ninkii dano adduunyo lahaa ay kala baxayaan. Waxaa iyana iska muuqatay saraakiisha maxaakiimtu inay siyaasadda curdan ku ahaayeen oo aysan tatab u hayn hoggaaminta dal dhan, laakin ay gacan ka geesan kareen inay nadaam caddaalad ku salaysan oo diintu ku xooggan tahay taageeraan, waxna ka wadaan.
Maantana wali maxkamadaha fursaddii ay taageerada shacabka Soomaaliyeed ka heleen iyo magacoodiiba waa soo ceshan karaan, taasina waxay ku imaanaysaa haddii Itoobbiya ka dhabayso qabsiga dalka Soomaaliyeed oo nabad la waayo inay jahaad iyo halgan gobannimodoon ah hoggaamiyaan, oo shacabka hor-kacaan. Haddii ay dawladda Itoobbiya sheegashadeeda ka dhabayso oo dawladda ay gacanta siisay ku taageerto soo celinta qarinkii Soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo dib u heshiisintana waa inay nabadda gacan ka gaystaan oo haddii gogol nabadeed loo fidiyo ay oggolaadaan oo danta guud u adeegaan.
Haddii ay heshiis iyo nabad waayaan oo dantu baddo inay galaan dagaal dhuumaalaysi oo daba dheeraadana waa inay ka fogaadaan inay shacabka Soomaaliyeed dhiiggooda iyo sharaftooda iyo maalkooda bannaystaan. Oo ay la diriraan oo kaliya cadowga shacabka Soomaaliyeed ee ay markaas is hayaan.
Tawfiiqda iyo talada Allaha na solansiiyo.
By: Maxammed Maxammuud Aw Cabdi. Ndola- Zambia. Friday, January 19, 2007